dual punch-hole display နဲ့လာမယ့်ဆိုတဲ့ OnePlus 8 Pro | Net Guide
Home News International News dual punch-hole display နဲ့လာမယ့်ဆိုတဲ့ OnePlus 8 Pro
OnePlus 8 နဲ့ OnePlus 8 Pro ဖုန်းတွေဟာ OnePlus ရဲ့မျိုးဆက်သစ် flagship စမတ်ဖုန်းတွေ ဖြစ်မှာပါ။ ခန့်မှန်းချက်တွေ အရတော့ OnePlus 8 ဖုန်းတွေကို လာမယ့်နှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်လောက်မှာတရားဝင် မိတ်ဆက်ပြီး ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် tipster တဦးဖြစ်တဲ့ @OnLeaks. ကနေ OnePlus 8 နဲ့ OnePlus 8 Pro ဖုန်းတွေရဲ့ ပုံရိပ်အကြမ်းတွေကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း OnePlus 8 Pro ရဲ့ ရှေ့ပြေးပုံစံတမျိုး လူမှုကွန်ရက်ဝီဘိုမှာ ထွက်ရှိလာပါတယ်။ OnePlus 8 Pro ရှေ့ပြေးပုံစံမှာတော့ ဖုန်းရဲ့ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ကို ဦးစားပေးပြသထားပါတယ်။ OnePlus7Pro ဖုန်းတုန်းက လိုမျိုး curved display ကိုသုံးပြထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖုန်းရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ quad camera စနစ်ဖြစ်ပြီး ကင်မရာ ၃လုံးနဲ့ LED flash နဲ့ကို အစီအစဉ်ချထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံတွေကို ကြည်ရတာ ကွေးတဲ့မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဖုန်းရဲ့ နောက်ဘက် panel ကတော့ OnePlus 7T series နဲ့ကွဲပြားပြီး gradient ပုံစံမျိုးလေးပါ။
ပုံတွေကို အနီးကပ်ဆွဲယူ ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာလည်း OnePlus စမတ်ဖုန်းဆိုတာ သိသာလွန်းပါတယ်။ သူ့မှာ Alert Slider ပါဝင်ပြီး၊ curved screen နဲ့အတူ OxygenOS app drawer ကို
လည်း သုံးထားပါတယ်။ သေချာတွေ့လိုက်ရတဲ့ ပုံစံကတော့ ဖုန်းရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်မှာ punch-hole လုပ်ထားတာပါ။ အဲ့ထဲမှာ ကင်မရာ ၂လုံးထည့်ထားမှာပါ။ အခြားသတင်းတွေအရSnapdragon 865 သုံးပြီး 12 GB RAM သုံးလာမယ့် ဆိုတာပါ။
dual punch-hole display နဲ႔လာမယ့္ဆိုတဲ့ OnePlus 8 Pro
OnePlus 8 နဲ႔ OnePlus 8 Pro ဖုန္းေတြဟာ OnePlus ရဲ႕မ်ိဳးဆက္သစ္ flagship စမတ္ဖုန္းေတြ ျဖစ္မွာပါ။ ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြ အရေတာ့ OnePlus 8 ဖုန္းေတြကို လာမယ့္ႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ေလာက္မွာတရားဝင္ မိတ္ဆက္ၿပီး ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ tipster တဦးျဖစ္တဲ့ @OnLeaks. ကေန OnePlus 8 နဲ႔ OnePlus 8 Pro ဖုန္းေတြရဲ႕ ပုံရိပ္အၾကမ္းေတြကို ထုတ္ျပခဲ့ပါတယ္။
အခုလည္း OnePlus 8 Pro ရဲ႕ ေရွ႕ေျပးပုံစံတမ်ိဳး လူမႈကြန္ရက္ဝီဘိုမွာ ထြက္ရွိလာပါတယ္။ OnePlus 8 Pro ေရွ႕ေျပးပုံစံမွာေတာ့ ဖုန္းရဲ႕ ဘယ္ဘက္အေပၚေထာင့္ကို ဦးစားေပးျပသထားပါတယ္။ OnePlus7Pro ဖုန္းတုန္းက လိုမ်ိဳး curved display ကိုသုံးျပထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖုန္းရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာ quad camera စနစ္ျဖစ္ၿပီး ကင္မရာ ၃လုံးနဲ႔ LED flash နဲ႔ကို အစီအစဥ္ခ်ထားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေရွ႕ေျပးပုံစံေတြကို ၾကည္ရတာ ေကြးတဲ့မ်က္ႏွာျပင္တပ္ဆင္ထားတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဖုန္းရဲ႕ ေနာက္ဘက္ panel ကေတာ့ OnePlus 7T series နဲ႔ကြဲျပားၿပီး gradient ပုံစံမ်ိဳးေလးပါ။
ပုံေတြကို အနီးကပ္ဆြဲယူ ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာလည္း OnePlus စမတ္ဖုန္းဆိုတာ သိသာလြန္းပါတယ္။ သူ႔မွာ Alert Slider ပါဝင္ၿပီး၊ curved screen နဲ႔အတူ OxygenOS app drawer ကို
လည္း သုံးထားပါတယ္။ ေသခ်ာေတြ႕လိုက္ရတဲ့ ပုံစံကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕ထိပ္ပိုင္းညာဘက္ေထာင့္မွာ punch-hole လုပ္ထားတာပါ။ အဲ့ထဲမွာ ကင္မရာ ၂လုံးထည့္ထားမွာပါ။ အျခားသတင္းေတြအရSnapdragon 865 သုံးၿပီး 12 GB RAM သုံးလာမယ့္ ဆိုတာပါ။
Previous articleတရုတ်တွင် Samsung Galaxy Fold စမတ်ဖုန်းများ ငါးမိနစ်အတွင်း အကုန်ရောင်းချခဲ့ရ
Next article5G အမျိုးအစား Nokia 8.2 ကို MWC 2020 မှာကြေညာလာမည်
ကျောဘက်ကင်မရာနှစ်လုံး၊ ဘက်ထရီ 5000 mAh ၊ Snapdragon 439 Chipset သုံးထားတဲ့ Redmi 8A...
Digital Magazine Service ကိုပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Google News